थप समाचार बुधबार, जेठ २१, २०७७
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितमध्ये तीन जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ। तीन जनामध्ये एकको अवस्था जटिल रहेको अस्पतालका डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिएका छन्। उनी दाङको बबई गाउँपालिकाका ३० वर्षीय पुरुष हुन्।
बेलझुण्डीस्थित कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनमा डेङ्गी पनि देखिएपछि बुटवल ल्याइएको हो। अहिले उनमा निमोनिया देखिएको छ। त्यसैगरी अन्य दुई जनामा एक जना कपिलवस्तुका २२ वर्षीय युवक र रुपन्देहीका ५३ वर्षीय पुरुष छन्।
२२ वर्षीय युवामा मधुमेह भएको र उनलाई शुरुमा अस्पताल ल्याउँदा सास फेर्न गाह्रो भएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि उनलाई आईसीयूमा सारिएको डा. थापाले बताए। अस्पतालको जनरल वार्डमा रहेका अन्य संक्रमितको स्वास्थ्य भने सामान्य छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, कुल संक्रमित २ हजार ३०० मध्ये २७८ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने नौ जनाको मृत्यु भएको छ। अब देशभरका विभिन्न अस्पतालमा २ हजार १३ जनाको आइसोलेसन वार्डमा उपचार भइरहेको छ।